CIISE WUXUU LEEYAHAY AWOOD UU DEMBIYADA KU CAFIYO!!! – Akhbaarta Wanaagsan
CIISE WUXUU LEEYAHAY AWOOD UU DEMBIYADA KU CAFIYO!!!
Posted on September 10, 2016 October 12, 2016 by Maroodiga
Guryaha Reer Binu Israaiil waxay ka samaysnaayeen dhagxaan waa weyn ,waxayna lahaayeen saqaf fidsan oo xataa dadku kusoco karaan,oo ka samaysan dhoobo ama carro la qalajiyey.kuwa kalena waxay ka samaysnaayeen alwaax iyo Mutuleel(dhagxaanta guryaha lagu qurxiyo sida qololka iyo barsooyinka)mana ahayn kuwa lagu socon karo.
Afar nin oo sida nin saaxiibkood ah oo ahaay mid cuuryaan aha oo aan socon Karin ayaa qolkii Ciise dadka wax ku barayay kor kasoo geliyey. Waayo gudaha ma aysan geli Karin oo dad badan ayaa joogay,markaasay saaxiibkood oo sariirta saran waxay kasoo geliyeen kor oo qayb saqafka ka mid ah ayay kala dhaqaajiyeen. Markaas ayay waxay hoos u dejiyeen saaxiibkoodii bukay oo sariirtiisii ku jiifa, meel ku dhow Ciise lugahiisa . Iimaanka dadku wuxuu sababaa in dadku mararka qaar sameeyaan wax yaabo waaaweyn oo geesinimo leh.waayo waxay aaminsanyihiin ilaah weyn oo cajiib ah.
Ciise oo rumaysadkooda arkay wuxuuna ninkii ku yiri’ dembiyadaadii waa la cafiyey( Markoos2: 5).mid ka mid ah macalimiintii faarisiinta ahaa ayaa maqlay hadaladdii ciise wuuna rumaystay,laakiin kuwo badan oo kale ayaa arrintaas maqlay weyna ka xumaadeen oo kacowdeen,oo waxay dhaheen yuu yahay midkaan cafinaya dembiyada dadka?arrintaas ilaah oo kaliya ayaa samayn kara!(Markoos 2: 7).tani waa shirki ayay dhaheen iyo gef ilaah loo gefayo (Sabuurradii 74:18; Ishacyaah 52: 5; Rooma2:24).
xiliggii Axdigii hore,taliyayaasha yahuudu qofkii waxaas oo kale lagu helo abaal marintiisu waxay ahayd in la dhagxiyo (Rooma 11-14 Leviticus 24) waayo ayagu ma aysan aysan garanayn Ciise, iyo weliba runta Ilaah ee ku saabsan Ciise Masiixi.
Ciise wuxuu gartay waxa ay ka fakaayaan faarisiintu markaaasuu ku yiri yaa fudud in la dhaho qof dembiyadaadii waa la cafiyey iyo in la dhaho kac oo sariirtaada qaado?wuxuu tan u sameeyey inuu tuso inuu yahay wiilka ilaah ee awood u leh aduunka korkiisa inuu dembiyada ku cafiyo dadkana caafiyo
(Markoos 2: 9,10). Ninkiina wuu bogsaday.Qof kasta oo arkay ninkii uu Ciise bogsiiyey ilaah buu amaanay iyagoo leh weligeen ma arkin sidaan oo kale.
(Markoos 2:12- 2:10) Ciise qudhiisa ayaa isugu yeedhay wiilka Aadanaha,Wiilka Aadanaha’ waxaa loo isticmaalaay Axdigii hore Ezekiel,kaa soo ahaay Nebi Ilaah. Danyeel l iyo Yooxaanaa sidoo kale waxay ugu ugu yeedheen Ciise wiilka Aadanaha,taas micnaheedu waxa weeye waa mid leh awood Ilaah oo xoog badan
(Danyeel 7: 13,14; Muujintii 1: 13-18).aayadahaani waxaa kale oo ay na barayaan runta kusaabsan Ciise Masiix,taasoo ah aas-aaska iimaanka Masiixiyada.
Ciise Masiix ayaa lahaa talada iyo amarka Ilaah uu dembiyada ku cafiyo (2:10).Mar kale wuxuu leeyahay, waxaan u imid si aan u helo dembilayaasha oo ayna isoo raacaan (2:17). Tani weli waa addeegida Ciise ee maanta.
Walaalayaal aan u imaano Ciise Masiixi si uu noogu dembi dhaafo.
Rabbigu ha na barakeeyo.
Posted in All resources, Lectures, Qoraal, Waxbaritaanka